कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा राख्नु हाम्रो दायित्व हो - RoadMapNews
गणेश ठगुन्ना / संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
RoadMap News	प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०९, २०७७ समय: ९:४७:०५
० पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ । निजामती सेवाको शाख राख्दै जनविश्वास हासिल गर्न तपाईँसँग के छ योजना ?
निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा भने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । देश संघीयताकोमा प्रवेश गरी सोही किसिमको अभ्यास गरी रहँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ, कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ, म त्यसमा प्रतिबद्ध छु ।
० कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ, कसरी अनुशासित बनाउन सकिएला ?
० संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहमा कर्मचारी बाँडिएका छन्, हरेकका आ–आफ्नै समस्याहरू देखिएका छन् यसलाई कसरी मिलाउँदै लैजानुहुन्छ ?
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि अहिले तीन तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना छन् । बढीभन्दा बढी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटाइनुपर्छ ताकी स्थानीय स्तरमा नै जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकुन् । आवश्यक ऐन कानुन बनाएर पनि स्थानीय तहले नै पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्थापन पनि गरिनुपर्छ । तीनै तहमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई आफू समायोजन भएर जाँदा कुनै ठाउँमा ठुलो भएर बस्नुपर्ने र कुनै ठाउँमा जाँदा सानो भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा हीनताबोध हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कतिपय कर्मचारीहरू संघमा रहने तर स्थानीय तहमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीमा यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीलाई जहाँ खटाइए पनि म जान्छु भनेर स्वतःस्फूर्त माग गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ ।
० समायोजन बिग्रेका या भनौँ न्याय गर्न नसकेका पनि कैयन् कर्मचारी छन्, तिनको विषयमा केही थाहा छ यहाँलाई ? यदि छ भने के कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नुभएको छ ?
समायोजनका क्रममा कुनै कर्मचारीलाई पीडा भएको छ भने त्यसबारेमा सरकारले समयमै हेर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा कुनै कर्मचारीले खोजेको ठाउँ नपाउने कुराको लागि हेरेर सम्भव हुँदैन तर साँच्चिकै समायोजनका क्रममा भेदभाव भएको छ, कर्मचारी मर्कामा परेका छन् भने त्यसलाई हेरफेर गरिनुपर्छ । भेदभाव भएका कर्मचारीलाई न्याय दिइनुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले विचार पु¥याएर उचित गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचाई बनाएको छु ।
० कर्मचारीहरूको मुख्य कानुन अर्थात् संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीनै तहको प्रशासनिक अवस्था ठप्प प्रायः छ, छिटो ल्याउनका लागि यहाँको के कस्तो प्रयास रहन्छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले प्रादेशिकदेखि स्थानीय तहसम्म पनि सेवा ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्न र पदपूर्ति गर्न अवरोध सिर्जना भएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जनताले जुन किसिमको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो किसिमको सेवा सुविधा जनताले पाउन सकेका छैनन् । मैले एक÷दुई दिनमै मन्त्रालय सम्हालेको अनुभवबाट हेरिरहेको छु, कतिपय जिल्ला समन्वय समितिहरूमा नासु र खरिदारसमेत छैनन् । यस्तो किसिमको परिस्थितिको हामीले तुरुन्तै निकास दिन जरुरी छ । संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर यस संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
० पछिल्ला केही वर्षयता यस मन्त्रालयलाई सरुवा मन्त्रालयका रूपमा पनि चित्रित गरेको पाइन्छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना छ तपाईँसँग ?
० तपाईं पनि दूर दराज भनेर चित्रित गरिने दार्चुलाकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, सोर्सफोर्स नहुनेको कुरा सुनुवाइ नै नहुने विगतको प्रथा र परम्परासँग कतिको जानकार हुनुहुन्छ ?
० कर्मचारीतन्त्रबाट तपाईँले कसरी आफ्ना योजना लागू गराउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
मैले पहिले नै भनेँ कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । जनताले सरकार निर्वाचित गर्ने, सरकारले नीति निर्माण र कार्यक्रम बनाउने र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा राख्नु हाम्रो दायित्व हो । राज्यको तर्फबाट उनीहरूको सेवा सुविधादेखि लिएर वृत्ति विकास, सरुवा बढुवासम्म सबै सिस्टममा ढाल्न सक्यौँ भने कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेमा कुनै शंका छैन । उच्च मनोबल भएका कर्मचारीले मात्रै राष्ट्रका लागि काम गर्न सक्छन् र हामीले काम लगाउन सक्छौँ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा उच्च मनोबल कायम गरेर काम गरौँ । भएका समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजौँ । म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म मैले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि उपयुक्त काम गर्नका लागि मेरो निरन्तर प्रयास रहनेछ । मेरो प्रमुख कर्तव्य पनि यही हो र प्रयास पनि यही हो ।